Nagu saabsan - Hangzhou Better Daily Products Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2015. Waxaan nahay shirkad ku hawlan soosaarka OEM iyo ODM ee alaabada maalinlaha ah ee la isticmaalo.
Soo saare xirfadle ah masaxa qoyan.
Waxaan diirada saareynaa cilmi baarista iyo horumarinta, soo saarida iyo iibinta masaxa qoyan ee qeybaha kala duwan. Qaybahayaga masaxa ee qoyan waxaa kamid ah masaxda alkolada, masaxida jeermiska, nadiifinta mashiinka, tirtiraha masaxa, tirtirka caruurta, masaxa baabuurta, masaxa xayawaanka, mashiinka jikada, masaxada qalalan, masaxa wajiga, iwm. gacmo nadiifiye iyo waji daboolan. Waxaan u qabannaa adeegyo macaamiishayada ah. Waxaan diirada saareynaa seddex xariiq oo ganacsi oo kala duwan oo qiimo sare u keena macaamiisheena sida shirkad kale oo kiimiko ah. Hal ku dhiga shirkadeenu waa "Badbaadada, R&D iyo Adeegga".
Waxaan leenahay rukhsad soo dejin iyo dhoofin. Xaqa dhoofinta badeecadeena waa la damaanad qaaday. Wax soo saarkayagu waxay ka diiwaan gashan yihiin EPA, FDA, MSDS, EN, CE iyo shahaadooyin kale. Haddii aad leedahay shuruudo kale oo caddeyn ah, waxaan aad u diyaar u nahay inaan kula xaajoodno inaan dhameystirno;
Wax soo saarkayagu waa loo dhoofiyaa adduunka oo idil. Waxaa naga go'an inaan siino alaab iyo adeegyo tayo leh nooc kasta.
Better Daily Products Co., Ltd. waxay leedahay koox diiran oo saaxiibtinimo leh oo xirfadlayaal khibrad u leh soo-saarka, iibinta, gaadiidka caalamiga ah iyo maaraynta guud, oo laba ka mid ah ay leeyihiin wax ka badan 10 sano oo khibrad shaqo ah. Waxaan ka helnay amaan badan macaamiisha adeegyadeena degdega ah ee fekerka leh sababtoo ah alaabteena tayada sare leh iyo kooxda suuqgeynta firfircoon.
BETTER waxay bixisaa heerar adeeg oo heer sare ah waxaana taageera qiyamkeena kalsoonida, daacadnimada iyo hamiga tayada. Tani waa sababta ay in badan oo macaamiisheennu ay daacad u ahaayeen sannado badan. Waxaan marwalba qabanay shaqo weyn.